OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha!
(Qeerroo) — Finfinnee, Oromiyaa
Akkuma kana qabsaa’otaaf quucarsitoonni qabsoo wal faana saatii guksan nii qabu. Saatii wal faana guksan sanatti walumatti qabaa qabsaa’otaa taasisanii kunuunsuun gaariidha. Hanga dhumaatti walitti qabanii kunuunsuun garuu waandabaati. Adeemsa keessa addaan dhilamuun gaafa dhuftu maancidiin qabsaa’otaa jarreen dhabamsiisuu qaba. Kun tooftaa qabsoo jiraachisuuti jennee fudhanna. Diinni qabsoo Oromoo Oromoota fakkaattee waggoota dheeraa kunuunfamaa turterti ta’a. Haa badan saatiin ammaa aramaa qabsoof siphoo qabsoo addaan dhiluuf yeroon gaheera. Kanneen kanaaf maancidiin Qeerroo ol haa kaafamu jenna. Jarreen qabsoo keenya dhoraa turan haa caragnu. Jarreen kana gaafa caragnu qabsoof haala mijeessuu hubatuu qabna.
Duuchaatti Oromoonis ta’e qaamni Oromoof falmu kamuu “Sangaan nii dhala jedhee sangaa jala eeguun” gowwummaadha. Sangaan sangaadha. Waan hinjirre waan hinjijjiiramnerraa jijjiirama yeroo eegnu hinqabnu. Jijjiirama kan fidu kaayyoo jabaa uummataa fudhatee kan sochiirra waggoota dheeraaf jiru Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) ta’uu hubachuun barbaachisaadha! OPDO irraa jijjiirama eeguun bakka Loon hinoollee Dikee barbaaduudha. OPDO’n bixxillee garboonfataati. Bixxillee kana dhabamsiisuun garboonfataa dhabamsiisuudha. Waan ta’eef FXG bakka maraa finiinsinee jirru gad haa jabeessinu.
Uummanni Oromoo Qawwee saamamee ture haa deeffatu. Kan danda’u haa bitatu. Kan Qawwee bitachuu dadhabe Eeboo isaa haa qarsiifatu, Maancaa haa tumsiifatu, Shimala haa muratu. Qabsoo jalqabaa caasaa Wayyaanee OPDO bakka maraa bubbutuuf dhabamsiisuu irratti haa hojjetu. Qabsoo roga maraan finiinee jiru gad-haa jabeessinu.